Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Alaba Oo Go'an Ka Qaatay Ku Biirista Chelsea, Xaalada Isco Ee Suuqa Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Alaba oo go’an ka qaatay ku biirista Chelsea, Xaalada Isco ee Suuqa iyo Qodobo kale
Wararka Suuqa kala iibsiga: Alaba oo go’an ka qaatay ku biirista Chelsea, Xaalada Isco ee Suuqa iyo Qodobo kale
March 24, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 24 Maarso
Bayern Munich ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta Lucas Vazquez si ay xagaaga ula wareegaan, sida laga soo xigtay AS .
Inter Milan ayaa ku soo biirtay liiska kooxaha doonaya inay la soo wareegaan xidiga Liverpool ee Divock Origi hadii uu weeraryahanka uu go’aansado inuu u dhaqaaqo meelo kale oo suuqa kala iibsiga soo socda, sida uu qoray wargayska Calciomercato .
Liverpool ayaa ka mid ah kooxaha isha ku haya xaalada qandaraaska daafaca Real Madrid Nacho Fernandez, sida ay qortay jariirada AS ,
Isco ayaa laga yaabaa inuu u dhaqaaqo Inter Milan hadii kooxda reer Talyaani ay ku guuleysato inay ka shaqeyso dhibaatooyin dhaqaale, Sport.es
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 24 Maarso
Arsenal ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Betis Guido Rodriguez, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo.
David Alaba ayaa diidi doona wax kasta oo horumar ah oo kaga yimaada kooxaha sida Chelsea iyo Paris Saint-Germain, sida ay qortay Sky Sports.
Arsenal ayaa weydiineysa su’aalo ah hadii Real Madrid ay diyaar u tahay inay amaah labaad ku bixiso Martin Odegaard, sida ay qortay Eurosport.
Xiddiga Manchester City Eric Garcia ayaa qirtay inay “qaas u tahay” inuu ka garab ciyaaro Lionel Messi isagoo ka hadlaya wararka la xiriirinaya Barcelona. Goal
AC Milan ayaa isha ku heysa inay heshiis joogto ah la gaarto ciyaaryahanka Chelsea Fikayo Tomori, laakiin ma awoodi doonaan inay kala xaajoodaan 26 milyan oo ginni oo u dhiganta $ 36.5 milyan oo doolar si ay ugu iibsadaan xiddigooda amaahda ah. goal
Xiddiga Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus ayaa weli shaki ka qaba rajada uu ka qabo inuu ka hoos shaqeeyo Xabi Alonso, isagoo ku adkeysanaya inuu kaliya ka hadli doono xiddigii hore ee Liverpool, Real Madrid iyo Bayern Munich hadii loo xaqiijiyo inuu yahay tababaraha cusub ee kooxda. Goal
Ronald Koeman ayaa sii joogi doona booskiisa Barcelona xilli ciyaareedka 2021-22, sida ay qortay Esport3 .